Ihe kacha mma na-eme ihe nkiri na mmepụta | Huanna
Ihe nkiri a bụ nke PLA, nke na-anaghị egbu egbu na mmadụ na gburugburu ebe obibi. Ọ na-agbadata kpamkpam na mmiri na carbon dioxide n'okpuru ọnọdụ compostable na ọnwa 6, yabụ ihe a nwere mmekọrịta enyi na enyi ma nyere gị aka ichedo gburugburu ebe obibi ma belata mmetọ. Ọ nwere ezigbo ike, ike ibu siri ike, akara akara, enweghị ụcha na ụdị nkwụsị.
Ntọala Ntọala Ngwaahịa
Ihe: PLA, Polylactic acid, PLA size: 30cm * 30m, 10mic / ukwu
Ekweghị ekwe: Adụ Ebe Mmalite: Shanghai, China
Nghọta: Piel Agba: uzo
Brand aha: NATUREPOLY Nnyefe: 20-30ụbọchị
Echiche: 10mm Ngwa :: Ahịa nri, Ebe a na-ere nri, marklọ ahịa, Kitlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ,
Ngwugwu: 1 mpịakọta / igbe, 40 igbe / katọn Typedị azụmahịa: Emeputa
Ihe nkiri a bụ nke PLA, nke na-anaghị egbu egbu na mmadụ na gburugburu ebe obibi. Ọ na-agbadata kpamkpam na mmiri na carbon dioxide n'okpuru ọnọdụ compostable na ọnwa 6, yabụ ihe a nwere mmekọrịta enyi na enyi ma nyere gị aka ichedo gburugburu ebe obibi ma belata mmetọ. Ọ nwere ezigbo ike, nrụgide siri ike, njigide akara, enweghị ụcha na ụdị nkwụsị. Ọ dịkwa mfe ịdọka, ahụike na isi, nke bara uru maka ahụike ndị ọrụ. Site na nghọta doro anya, yana njigide nke ọma, ọ bụ ezigbo nhọrọ iji kechie nri ọhụrụ dịka anụ, mkpụrụ osisi, akwukwo nri wdg, nke nwere ike ịgbatị nri 'ọhụụ. Ọzọkwa, anyị na-achọpụta na ngwaahịa a anaghị egbu egbu, yabụ na ịkwesighi ịtụle ahụike nri. Ihe ngwugwu a PLA anaghị agbaze na oven microwave, ọ naghị ada ada n'ihi mgbasawanye uzuoku, nke na-eme ka ọ dị mfe ịgbaze ma megharịa nri ahụ. N'ụzọ dị otú a, enwere ọtụtụ ihe nkiri ị nwere ike iji ngwaahịa a dị ka ndụ ụbọchị na picnics. Ọ bụrụ n'ịchọrọ idobe nri gị ọhụụ, ihe nkiri PLA a bụ nhọrọ kachasị mma.
Hergbaso isi ụkpụrụ nke "àgwà, na-eweta, arụmọrụ na uto", Anyị ji obi anyị na-anabata ma dokwara mba na ụlọ ụlọ ọrụ na-akpakọrịta, na-enwe olileanya na-arụ ọrụ na gị n'oge dị nso na-abịanụ! Anyị ebupụ ngwaahịa anyị n'akụkụ ụwa niile. Ọzọkwa, a na-arụpụta ngwaahịa anyị niile na akụrụngwa dị elu iji hụ na ọ dị elu. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị ọ bụla, biko egbula ịkpọtụrụ anyị. Anyị ga-anwa ike anyị niile iji gboo mkpa gị.
Ngosipụta Ngosipụta Ngwaahịa
Nke gara aga: Nkịta Poop akpa
Osote: Akpa ahihia
Ihe eji eme ihe nkiri
Zụrụ ihe nkiri nri
Kechie Ihe Nkiri
Mbukota Cling Film
Cgba ihe nkiri
Ihe nkiri Mmepụta